Ukwenziwa okumangalisayo kukaAndrea de la Ossa | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Njengebali elihle elothusayo lothando ngesona sitayile Ndifake phakathi, sinokuzibona simangalisiwe ukuba iyakuba njalo ukuba uAndrea De La Ossa uvele ngesiquphe ngolunye lobo busuku bumnyama apho inyanga inyamalala esibhakabhakeni nalapho ubumnyama buphantse busigubungela ngohlobo lokuba busenze sinyamalale.
UDe La Ossa ligcisa lobugcisa njengoko kubonisiwe iifoto zakhe apho yena ngokwakhe engumzekelo. Itshintsha ngendlela enokuthi ikushiye ukhubazeke ungoyiki ukuba akukho mntu ukuxelelayo ukuba kwikona ulinde ukukubulisa ngendlela enobuhlobo.
UDe La Ossa uyi-vlogger entle kwaye akanangxaki yokuziguqula ngenxa yabanye make-up eyakuba yibhombu ubusuku beHalloweenunjani nawe). Nangona singekho ngelo xesha lonyaka, akukho nto yenzekayo ukuzisa abalinganiswa aboyikisayo abasiboniswa leli gcisa ngobuchule balo obumangalisayo.
UAndrea unejelo lakhe le-YouTube apho yabelana ngetalente yakho nabo bafuna ukuqala kubugcisa obumnandi boyike apho amabali amaphupha amabi aphambili. Njengoko isitsho: «Ndenze eli jelo kwi-YouTube ngethemba lokufumana abantu abanomdla wokufumana ulwazi kunye nenkuthazo yokuziva behle ngakumbi.»
El ukwenziwa kukakrebe Kuyabetha ngokwenene kwaye ngokuqinisekileyo unokufumana isichazi sokwenene ngakumbi malunga noluvo lubalaseleyo. Olunye uguquko lwakhe luyonwabisa ngokwenene kwabo bathanda imovie eyoyikisayo neyoyikisayo apho ubumnyama kunye nobumnyama ziindlela ezikufutshane kakhulu zokoyikisa ukufa.
Unesiteshi sakho se-Youtube ukusuka apha, facebook wakho y I-instagram yakhe ukusondela kuye ubugcisa bokuhombisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umculi we-Makeup u-Andrea de la Ossa uziphendulela kwizilo ezibi